ကျွန်တော့်အတွေးမှန်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် ခရေ၀ကို လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့တို့ထိကိုင်တွယ်မိတာကိုတော့ သဘောကျမိသလို ခံစားမိတာတော့အရင်ကတည်းကပါ။ အ…ကျွန်တော်အသာလှဲလျောင်းပြီး ငြိမ်သက်နေတဲ့ခဏလက်တစ်ဖက်က ကျွန်တော့်တင်သား တွေကိုဖိကိုင်လာပြီး လက်ချောင်းတစ်ချောင်းက ခရေ၀ကို တကယ်ငြင်ငြင်သာသာတို့ထိလာပါတယ်။ ကျွန်တော်အသက်ကို ခပ်ပြင်းပြင်း ရှူရှိုက်မိလိုက်ပြီး တင်သားတွေကိုကျုံ့ဖြစ်ရော။ ရာဘာလက်အိပ်စွပ်ထားတဲ့ သူ့လက်ချောင်းတွေဟာ ချောဆီအနည်းငယ်သုတ်လိမ်း ထားကာ ခရေ၀တလျှောက် ဟိုသည်ကစားနေတယ် ရင်ထဲ ကျလိကျလိဖြစ်ရပါရဲ့။ ‘ကောင်လေး မင်း ဖင်ကိုအရမ်းကျုံ့ထားလိုက်ရင် ဆရာလက်ချောင်းလေးတွေ စအိုထဲထည့်တဲ့အခါ အနေရခက်နေလိမ့်မယ်ကွ’ သူက ခပ်တိုးတိုးပြောတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဘာမှ တုန့်ပြန်မပြောမိပါဘူး။
ကျွန်တော့်တင်သားဆိုင်ကို ဖိကိုင်ထားတဲ့သူ့လက်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီး ပေါင်သားအတွင်းပိုင်းဘက်ကိုဆွဲကိုင် ကာ ‘မင်းခြေထောက်တွေကို နည်းနည်းထပ်ကားလိုက်ဦး ကောင်လေး’တဲ့။ ကျွန်တော် ခြေထောက်တွေကိုနည်းနည်းထပ်ကားလိုက်ပြန် တော့ ကျွန်တော့်ခရေ၀ခမျာ နည်းနည်းဟသွားသလိုခံစားရပါတယ်။ သူ့လက်ချောင်းလေးတွေဟာ ခရေ၀တလျှောက်ပွတ်သပ်ကလိ တာကိုဆက်လုပ်ပါတယ်။ နောက်လက်တစ်ဖက်ကလည်း ချောဆီအနည်းငယ်နဲ့အတူ အခြားနေရာတွေကို ပွတ်သပ်လာတော့ ကျွန်တော့် တင်သားဆိုင်နေရာအနှံ့ပွတ်သပ်နေသလိုဖြစ်ပြီး ခရေ၀ကိုချောဆီတွေနဲ့ကလိနေပုံကလည်းကြက်သီးတောင်ထိမိလာပါရဲ့။ မသိမသာ ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံကို ငဲ့စောင်းကြည့်မိတော့ ပေါင်ခြားက ညီဘွားဟာ နောက်တစ်ခါမာတောင့်လာတာကို မြင်လိုက်ရတာမို့ ရှော့ခ်တောင်ဖြစ်သွားမိတယ်။
Wow….ဒေါက်တာကြီးဘာတွေ လာပြောနေလဲ? ကျွန်တော့်အပေါ်များသူ့သုက်ရည်တွေပန်းထုတ်မလို့လား? နောက်တော့ အခြားလက် တစ်ဖက်က အပေါ်နည်းနည်းတက်လာတဲ့ ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေကိုပွတ်သပ်ပြီး အောက်ကိုဆွဲဆွဲချတယ်။ ‘မင်းက တော်တော်လှတဲ့ လိင်ဥ တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲကွ၊ လိင်တံနဲ့ လိင်ဥက ဘက်ညီတယ်…သုက်ရည်တွေနဲ့ပြည့်နေမှာပဲနော်’ သူ့လက်ချောင်းအချို့ ကျွန်တော့် အပေါက်ထဲ စတင်တိုးဝင်စပြုလာပြန်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ တုန့်ဆိုင်းဆိုင်းဖြစ်မနေတော့ဘဲ လျှောကနဲ နင့်ကနဲ။ ဒါပေမဲ့ ဘာကြောင့်လဲ တော့မသိဘူး နာကျင်မှုမရှိ ချောချောမွေ့မွေ့အဆင်ပြေနေရော။ ချောဆီတွေသုတ်လိမ်းထားတဲ့ သူ့လက်ချောင်းများကြောင့်လည်း အထိတ်တလန့်ဖျစ်ညှစ်မထားတော့တဲ့ ကျွန်တော့်ခရေကြွက်သားများကြောင့်လားတော့မသိပါ။ အာ….အခု သူ့လက်ချောင်းနှစ်ချောင်း ကိုပူးပြီး အထုတ်အသွင်းလုပ်နေပြီးနောက် တတိယတစ်ချောင်းကိုထပ်သွင်းဖို့သူ စလုပ်တယ်ဗျ။ လုပ်ပုံက နှိုးဆွတာရဲ့အလွန် နာကျင် တော့မှာပဲလို့ ကျွန်တော်စိုးရွံ့သွားပေမယ့် မနာဘူး အဟိ…ယားသလိုပဲ ကလိထိုးသလို။ ခြေထောက်တွေကို တောင့်တင်းမှုတွေ မလုပ် တင်သားတွေကို ဖျစ်ညှစ်ထားခြင်းမရှိ အလိုက်သင့်နေခြင်းရဲ့အဖြေက လေဟာနယ်ထဲ ခုန်ခုန်ဆင်းရသလို ခံစားချက်မျိုးရရှိစေပါတယ်။ အို…ဒေါက်တာနဲ့တော့ခက်နေပြီ သူနဲ့ ကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်ဖြစ်နေကြပါလိမ့်။ ခေါင်းလေးကိုအသာငဲ့စောင်းပြီး အောက်ပိုင်းကိုကြည့် လိုက်တော့ ဒေါက်တာကြီး ပါးစပ်လေးတဟဟနဲ့ ကျွန်တော့ရွှေဥတွေ ခရေ၀တွေကို လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ ဆော့ကစားနေတယ်။ ကြည့်ရတာ သူ့မျက်ဝန်းတွေ မျက်နှာအမူအယာတွေက တကယ့်ကို ကျေနပ်သဘောကျလွန်းနေတဲ့ဟန်နဲ့ပါ။ ကျွန်တော့်ကို တစ်ချက် မျက်လွှာလှန်ကြည့်လိုက်ပုံက သူလုပ်နေတဲ့ကိစ္စကို ဘယ်လိုမှ မရပ်တန့်နိုင်တော့သလို သူ့ကိုယ်သူ အလွန်ထန်နေပြီဆိုတာကို မထိန်းသိမ်းတော့တဲ့သဘောပါနေပါပြီလေ။
‘မင်း -ဥတွေ အပေါက်ထဲလက်နဲ့အထုတ်အသွင်းလုပ်နေရတာနဲ့ ဆရာတော့ ထနေပြီ။ ဖီလင်ဘယ်လိုလဲကောင်းလား?’
ကျွန်တော် ခေါင်းညိမ့်ပြလိုက်ပါတယ်။ ကြက်သီးထတာလဲမဟုတ် ယားယံတာလည်းမဟုတ် ဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးလဲဆိုတာသူသိပါ့မလား။ ကျွန်တော့် တင်သားဆိုင်တွေဟာ သူ့လက်ချောင်းတွေ အပေါက်ထဲ အထုတ်အသွင်းလုပ်ချိန်တိုင်း ဆတ်ဆတ်ခါသွားမိသလို ကျွန်တော့် ငပဲထိပ်က အရည်ကြည်တွေဟာလည်း တစိမ့်စိမ့်ယိုတာများ အားပါး..။ ဒေါက်တာ မတ်တပ်ရပ်လိုက်ကာ ကားနေသော ကျွန်တော် ပေါင်တံတွေနား တိုးကပ်လာတယ် သူ့လက်ချောင်းတွေ ပိုမိုပူးကပ်ပြီး ခရေ၀ထဲအထုတ်အသွင်းလုပ်နိုင်ဖို့ပေါ့။ သူ့လက်ချောင်းတွေ အကုန်လုံး ကျွန်တော့်အပေါက်ထဲ တိုးဝင်ကုန်တော့မလားမသိဘူး ထူးခြားတာက ကျွန်တော် ငြင်းဆန်လိုစိတ်မရှိတော့တာပါပဲ။ သူ့လက်ချောင်းတွေကို ခရေကြွက်သားတွေနဲ့ ဖျစ်ညှစ်ကစားမိတော့ ဒါ သဘာဝက သင်ကြားလိုက်တာလား မဆီမဆိုင်တွေးမိသေး တယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ မာတောင့်နေတဲ့ ငပဲကြီးကို ကြည့်ပြီး ဒေါက်တာရဲ့ နှုတ်ခမ်းသားတွေ တရွရွဖြစ်နေသလို ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေကို ပွတ်သပ်တာတွေက မြန်လာတယ်။ ကျွန်တော် သိပ်ကြာကြာထိန်းသိမ်းနိုင်တော့မယ်မထင်ပါဘူး….အသားကုန် မတ်ထောင်နေပြီး သကာလ ထိပ်ဝက အရည်ကြည်တွေကလည်းရွှဲနေပြီလေ။ ကျွန်တော် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိန်းလိုက်နိုင်တော့ ကိုယ့်ငပဲကိုကိုင်ကာ စတင် -ွင်းထုမိပါတယ်။ အ၀တ်မဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ရှေ့မှာ ၀တ်လစ်စလစ်ဖြစ်နေတာ ရှိနေတာကိုလည်း ဂရုမစိုက်နိုင် တော့ဘူးဗျာ။ အဲ့ဒီအခြားသောလူဆိုတာက ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲကို လက်ချောင်းတွေ အထုတ်အသွင်းလုပ်ပြီး ရူးသွပ်အောင်လုပ်နေသလို ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေကိုဆွဲဆွဲကလိနေတာမျိုးတွေလုပ်နေပြန်တော့ အမလေးတရတော့မယ်လေ။ သူတကယ် ဘာမှဂရုမစိုက်နေတော့ဘူး ထင်တယ် ကျွန်တော့်ငပဲကိုသူ့လက်နဲ့အသာဆွဲကိုင်ပြီး -ုပေးတယ် အပေါ်ကိုတက်သွားလိုက် အောက်ကိုဆွဲချလိုက် လက်ချောင်းတွေကို တကယ့် အနှေးပြကွက်အတိုင်းပါပဲ။ ကျွန်တော် သူ့ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့လက်ချောင်းတွေထဲ ငပဲကို ခါးကော့ကာ ဆောင့်ဆောင့်သွင်းမိတော့ သူ့လက်ချောင်းတွေက ကျွန်တော့်ခရေထဲကိုမြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်ပေါ့။
စိတ်ထဲမှာ တော်တော့်ကို ထန်ပြီး ထိန်းသိမ်းလို့မရတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံဝယ် လိင်စိတ်တက်ကြွမှုကြောင့်ထွက်လာတဲ့ အရည် ကြည်အချို့ရဲ့အနံ့အသက်တွေ ပျံ့နေသလို ဒေါက်တာကြီးနှုတ်ဖျားကနေပြီး ကျွန်တော်လက်ကစားနေတာကိုကြည့်ကာ မိန့်မူးညည်းညူ တဲ့အသံတွေထွက်လာပါတယ်။ ခပ်သွက်သွက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ ကျွန်တော့်လက်ချောင်းတွေကို တစ်ချက် သူအနမ်းပေးတယ်၊ပြီးတော့ ထိပ် အရေပြားနောက်ကိုဆုတ်သွားတိုင်းပေါ်ပေါ်လာတဲ့ အရည်ကြည်တွေစို့နေတဲ့ ငပဲခေါင်းလေးရှိရာကို ငုံ့ကိုင်းလိုက်ကာ လျှာဖျားလေးနဲ့ တို့တို့ပြီး အရည်ကြည်တွေကိုလျက်တယ်ဗျာ။ သူ့မျက်ဝန်းတွေဟာ ထက်သန်နေတဲ့ အာသီသတွေကြောင့် တောက်ပနေသလို သူ့အပြုအမူ သူ့ထိန်းချုပ်ရမယ့် အကြောင်းအရာတွေကို သတိမမူတော့ စိတ်လွတ်သွားပြီထင်ပါရဲ့။ ဒါတွေ ဒါတွေကိုကြည့်ရပြန်တော့ ကျွန်တော့် ငပဲ၊ ရွှေဥတွေ၊ ခရေ၀တွေကို ဒီလူကြီးအတွက် ရက်ရောစွာပေးဆပ်နေမိတာ မတွန့်ဆုတ်တော့ပါဘူး။
ကျွန်တော် ဒေါက်တာကြီးရဲ့ ပေါင်ခြံကိုငဲ့စောင်းကြည့်မိပြန်တော့ မာတောင့်နေတဲ့ ငပဲထွားထွားကြီးက သူ့ဘောင်းဘီထဲကနေ ရုန်းကန်ထနေသလို အစိုကွက်ကြီးတစ်ကွက်ကလည်းရွှဲနေရော သူ့အရည်ကြည်တွေကြောင့်ထင်ပါ့။ အာ…မြင်ရတာနဲ့တင် ဘယ်လောက်ထန်နေပြီလဲဆိုတာ ကြက်သီးတောင်ထမိပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဘယ်တုန်းကမှ အခြားသောအမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ မာတောင့်နေတဲ့ငပဲကို မမြင်ခဲ့စဖူး၊နောက်ပြီး ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေ ခရေ၀တွေ ကွမ်းသီးခေါင်းလေးတွေကို ဘယ်ယောက်ျားတစ်ယောက်ယောက်ကမှ မလျက်ပြုပေးစဖူး။
‘ဒေါက်တာ…ဒေါက်တာ့ -ီးကြီးကိုအပြင်ထုတ်ကြည့်ပါလားဗျာ’ ကျွန်တော် မရဲတရဲပြောကြည့်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်ပါးစပ်က မမျှော်လင့် ဘဲထွက်သွားမိတာသေချာတယ် ဒီဘိုးတော်ရဲ့ ကြီးထွားမာတောင့်နေတဲ့ ငပဲကိုမြင်ချင်းလွန်းလို့ဖြစ်မယ်။ ကျွန်တော့် ရွှေဥတွေကို ဆုပ်ကိုင်ပွတ်သပ်နေတဲ့ သူ့လက်အစုံကိုရုပ်သိမ်းပြီးနောက် သူ့ဘောင်းဘီဇစ်ကိုဆွဲဖွင့်လိုက်ကာ ဘောင်းဘီကိုစချွတ်တယ်။
သူ့ဘောင်းဘီကို အောက်လျောချလိုက်ပြီး ခြေထောက်ကိုကြွကာ အကုန်ချွတ်ပစ်လိုက်တာပေါ့နော်။ သူ့ကိုယ်ဝယ် ရှပ်အင်္ကျီလေးရယ် Jock strap ဘောင်းဘီလေးတစ်ထည်ရယ်ပဲရှိတော့တယ်ဗျ။ ခဏနေတော့ ရှပ်အင်္ကျီကိုပါချွတ်ပစ်လိုက်တာကြောင့် jock strap လေးသာ ကျန်တော့ရာ ခါးစပ်မျှော့ကြိုးပြားခမျာ ရုန်းကန်ထနေသော ငပဲကြီးကြောင့် တင်းနေရော။ သူ့ငပဲခေါင်းဟာလည်း ခေါင်းပြူထွက်နေတာ မှာ အရည်ကြည်လေးတွေစို့လို့ပါ။ ဒါ တကယ့်ကို စိတ်လှုပ်ရှားစရာမြင်ကွင်းပဲဗျာ။ အရောင်ခပ်ညိုညို သွေးကြောအချို့ယှက်ဖြာလို့ ကွမ်းသီးခေါင်းကလည်း ကျွန်တော့်ဟာလိုပဲ ခရမ်းရောင်သမ်းစပြုပြီ။ တုတ်တာလည်း အတော်တုတ်သလိုပဲ။ သူ့ငပဲတွေကို ဘောင်းဘီ အပေါ်ကနေ သူ့ဘာသာအသာစတင်ပွတ်သပ်သလို သူ့လက်ချောင်းအချို့က ကျွန်တော့်ခရေ၀ကိုလှမ်းပြီး နှိုက်ကာ တွင်းချဲ့ပြန်တယ်။ နှစ်ဦးစလုံး တရှိန်ထိုးပြေးနေတဲ့ ရေနွေးငွေ့မီးရထားစက်ခေါင်းတွေလိုပါပဲ တရှူးရှူးနဲ့ အရှိန်မြင့်နေကြပြီ…အာ…ကျွန်တော်မကြာခင် သုက်ရည်တွေပန်းထုတ်မိတော့မယ်ထင်တယ်…အ။
‘ဒေါက်တာ….အဲတာလေးကိုပါချွတ်လိုက်ပါလားဗျာ ဒေါက်တာဟာကြီးအကုန်လုံးကို မြင်ချင်ကြည့်ချင်လို့ပါ’ ကျွန်တော်ရူးတော့မလားမသိဘူး အရမ်းကိုစိတ်ကြွနေပြီ သူ့ဘောင်းဘီလေးဆွဲချွတ်နေတာ စင်တစ်ခုပေါ်တင် လိုက်တာတွေကို လိုက်ကြည့်မိတဲ့အပြင် တရမ်းရမ်းဖြစ်နေတဲ့ သူ့ငပဲကြီးကိုလည်း အငမ်းမရဖြစ်မိတယ်။ အခုတော့ သူ့တစ်ကိုယ်လုံး အတတ်ကင်းမဲ့နေသလို သူ့လက်ချောင်းသုံးချောင်းစလုံးဟာလည်း ချောဆီအချို့နဲ့အတူ ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲအ၀င်အထွက်ခပ်သွက် သွက်ဖြစ်နေရော။ ဒေါက်တာ ငပဲကြီးဟာ ခေါင်းတရမ်းရမ်းနဲ့သွေးကြောတွေထောင်ထနေသလို အရည်ကြည်အချို့ထွက်ထားရာ အိုး…. ကျွန်တော် လုပ်သည့်အတိုင်း ဒေါက်တာကြီး သူ့ငပဲကို လက်ငါးချောင်းကော်မီတီနဲ့စတင်မိတ်ဆက်တော့တယ်။
သူ့ပါးစပ်က ညည်းညူပြောဆိုသံတွေက လှိုက်ခုန်နေသလိုပဲ ကတုန်ကယင်နိုင်လှသလို သူ့ခါးသွက်ပုံများ လူငယ်တွေလိုက်မမှီအောင် စက်သေနတ်တစ်လက်ပါပဲ။ သူ့လက်တစ်ဖက်က ကျွန်တော့်ငပဲအရင်းကိုအသာဆုပ်ကိုင်ထားသလို အခြားလက်တစ်ဖက်က အပေါ်ပိုင်း ကို လျောတိုက်ကိုင်တွယ်ကစားနေတာကလည်း တကယ့်ဆရာကျတယ်ဗျာ။
ကျွန်တော့်ကို ချောက်ကမ်းပါးအစွန်ကို ဆွဲခေါ်သွားတဲ့အချိန် အခါလေးဖြစ်ရော။ ကျွန်တော့်အပေါက်ထဲကို သူ့ငပဲကြီးနဲ့အထုတ်အသွင်းခပ်ပြင်းပြင်းလုပ်နေတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက်တည်းကျွန်တော့်ငပဲ အရင်းကို ဆုပ်ကိုင်ကစားနေတာက အမြန်ဆိုတော့ အသံတွေက မကြားချင်မှအဆုံးမြန်ဟည်းနေပါတယ်။ ဘယ်လိုမှ ကျွန်တော် မထိန်း နိုင်တော့တာကြောင့် ခပ်ကျယ်ကျယ်ပဲ အော်ဟစ်ညည်းညူမိသလို ‘ပြီး…အို အို အို…ကျွန်တော်ပြီးတော့မယ် FUCK ME!! ဒေါက်တာ’
လို့တောင်းဆိုတော့ သူကလည်း ‘မင်း….မင်း….-င်ထဲမှာ ပြီး…ပြီးနေပြီ’ လို့ပြန်အော်တယ်။ ခပ်သွက်သွက်ကစားနေတဲ့ သူ့လက်ချောင်း တွေထဲကနေ ကျွန်တော့်သုက်ရည်တွေ ခုန်ပျံထွက်လာတာဟာ ကျွန်တော့်မျက်နှာတွေ ရင်အုပ်တွေပေါ်အများအပြား ရောက်ရှိဆင်းသက် ကုန်ပါတယ် ခင်ဗျ။ ကျွန်တော့်ဖင်သားတွေနဲ့ထိတွေ့နေတဲ့ သူ့လိင်တံအရင်းကသွေးကြောကြီးများလှုပ်ရှားမှုကြောင့် သူသည်လည်း ကျွန်တော့်အပေါက်ထဲကို ပူနွေးနေတဲ့သုက်ရည်တွေဖြည့်ပေးနေပြီလို့ အသိနဲ့သတိရှိနေရပါရော။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သား မိနစ် အနည်းငယ်လောက်တော့ လုပ်လက်စ ထိုးသွင်းဆက်ဆံတာတွေ အရှိန်မပျက် အော်ဟစ် ဖျစ်ညှစ်တာတွေကို ဆက်လုပ်နေကြပြီး နောက်ဆုံးမှာတော့ ငြိမ်သက်စွာ တဖြည်းဖြည်း အေးဆက်သွားပါတော့တယ်။